Taona 2020 – IFM: omena lanja ny Malagasy | NewsMada
Taona 2020 – IFM: omena lanja ny Malagasy
Notanterahina ny faran’ny herinandro teo ilay hetsika « Taombaovao » fanaon’ny IFM etsy Analakely isan-taona. Ankoatra ny fanafanana lanonana nataon’ireo ampahana mpanakanto hanatanteraka hetsika ao amin’ity toerana ity amin’izao taona 2020 izao, nasongadin’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny IFM fa : « omena lanja bebe kokoa hatrany ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy amin’ity taona 2020 ity ».
Manamarina izany ny ankamaroan’ny fandaharam-potoana nampahafantarina ireo tonga teny an-toerana. Anisan’ireny ny « Nuit Malgache 2 – La survivance » handraisana mpanakanto malagasy mahatratra 20 mahery, miangaly taranjan-javakanto maro. Ny « Follz journée de la danse » izay hisy fampisehoana enina ao anatin’ny taona. Mpanakanto malagasy manao ny dihy ankehitriny no antsoina hanatanteraka ireo.
Tahaka izany ihany koa ny « Talents Malagasy » ahitana ny « Un jour, un artiste ». Ny « Lampihazo », sns. Hotohizana ihany koa ny fandraisan’ny IFM etsy Analakely ireo hetsika toy ny « Fête de la musique », ny « RFC », sns.